2015 May | MoeMaKa Burmese News & Media
Photo – Irrawaddy, 27th March, 2013 အောင်ဝေး –ဒေါ်အောင် ဆ န်းစု...
ငြိမ်းချမ်းအေး – ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့စိတ်
ငြိမ်းချမ်းအေး – ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့စိတ် မိုးမခ – မေ ၃၁ ၊ ၂၀၁၅ ဝမ်းပျက်သံများကြောင့် အန်ချခြင်း (၃) လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ အခုရက်ပိုင်း သတင်းဌာနတခုရဲ့ အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမ တယောက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကို...
ဖိုးစီ (ရုံးတော) – မင်းစဉ် မင်းဆက် ယတြာ ကွက်များ (မိုးမခ) မေ ၃၀၊ ၂၀၁၅ မဆလ အစိုးရ၊ နဝတ၊ နအဖ စစ်အစိုးရကနေ ဒီနေ့ ဦးသိန်းစိန်...
ကေဇ၀င်း – အတုတွေရှုံးတဲ့ ပွဲ
ကေဇ၀င်း – အတုတွေရှုံးတဲ့ ပွဲ (မိုးမခ) မေ ၃၀၊ ၂၀၁၅ တနိုင်ငံလုံးမှာ မီးလောင်နေတယ်ဆို အဲဒီ မီးကို ရေမှုတ်ထဲ ရဲရဲထအောင်မွှေပြီး သူတို့ ရှိူ့ ခဲ့ကြတာ။ ကျောင်းသားတွေရဲ့...
အောင်ဝေး –ဒေါ်အောင် ဆ န်းစု ကြ ည် သို့ေ ချ ပ ချ က်
အောင်ဝေး –ဒေါ်အောင် ဆ န်းစု ကြ ည် သို့ေ ချ...
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်မည်ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်) မိုးမခ မေ ၂၉ ၂၀၁၅ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ဇွန်လ ၅ ရက် သောကြာနေ့ ညနေ ၅နာရီ...
ဆောင်းလူ – သူမနှင့် ဘ၀ …
ဆောင်းလူ – သူမနှင့် ဘ၀ … (မိုးမခ) မေ ၂၉၊ ၂၀၁၅ (က) သူမ၏ ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်တွင် ထိုသူ၏ စိတ်အစာဖြစ်သမျှကို မနားတမ်း ကျဲချခံနေရ၏။ ထိုသူ၏ လက်တို့မှာကား တဆတ်...
ကာတွန်းအောင်မော် – သူတို့အထက်ရဲ့ အထက်က ကောင် (မိုးမခ) မေ ၂၉၊ ၂၀၁၅
ဆောင်းယွန်းလ – ဇာတ်
ဆောင်းယွန်းလ – ဇာတ် (မိုးမခ) မေ ၂၉၊ ၂၀၁၅ ဇာတ်က ဇက်ပေါ်မှာ မမြဲဘူး…. ဘယ်ဘက်ရင်အုံထက်မှာ ထိုးထားတဲ့ ဆေးမင်ကြောင်ဟာ ဇာတ်ကောင်ပဲ… နောက်ကြောင်းမပြန်ချင်ပဲ ဇာတ်က ဇာတ်ကို နောက်ကြောင်းပြန်နေရတဲ့...
မြဒေါင်းနွယ် – သူမ၏ ချစ်သူ (မိုးမခ) မေ ၂၉၊ ၂၀၁၅ သူမ၏ မိဘများနှင့် မောင်နှမများပြီးလျှင် သူမတွယ်တာရသည်မှာ သူတဦးတည်းသာ ဖြစ်သည်။ သူမဘဝတွင် သူသာလျှင် အရှင်သခင်ဖြစ်ပါသည်။ (၁) သို့သော်သူ့အတွက်တော့...
စိုးနေလင်း – ဆင်သွားပေမယ့် လမ်းမဖြစ်တဲ့ ကဗျာ (မိုးမခ) မေ ၂၉၊ ၂၀၁၅ ငါးပွက်ရာ ငါးစာချ စီးပွားရေးစနစ် ခေတ်သစ် မြစ် မချမ်းသာ ဖြစ်ခဲ့ရသော နှစ်ငါးဆယ်ကျော် ရေပေါ်ဆီ ယူနီဖောင်းဝတ်...
ဖိုးထက် – လူပါးဝသော စာအုပ်
ဖိုးထက် – လူပါးဝသော စာအုပ် (မိုးမခ) မေ ၂၉၊ ၂၀၁၅ အခြားသောဘာသာစကားတွေမှာ ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံရှိမည် ကျွန်တော်မသိ။ မကျွမ်းကျင်။ မြန်မာစကားကတော့ ရှုပ်လည်း ရှုပ်သလို ချစ်လည်း ချစ်စရာ ကောင်းသည်။...
ကာတွန်း ATH – ဟောက်သံထွက်ပေါ် တို့လွှတ်တော်
ကာတွန်း ATH – ဟောက်သံထွက်ပေါ် တို့လွှတ်တော် မေ ၂၈၊ ၂၀၁၅ ကာတွန်း ATH ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ပြန်လည်ကူးယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကိုသစ် (သီတဂူ) – ရေသန့်၊ လူသန့်၊ စိတ်မသန့်တသန့် (မိုးမခ) မေ ၂၈၊ ၂၀၁၅ (တစ်) လက်ထဲက ရေသန့်ပုလင်းကို ကိုင်နေရင်းက လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကျော်လောက်က အဖြစ်အပျက်ကလေးတခုကို ကြံကြံဖန် ဖန်ပြန် သတိရနေမိသည်။...
ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း – လိုချင်သေးလို့
ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း – လိုချင်သေးလို့ (မိုးမခ) မေ ၂၈၊ ၂၀၁၅
ရန်လင်းအောင် – နာရေး
ရန်လင်းအောင် – နာရေး (မိုးမခ) မေ ၂၈၊ ၂၀၁၅ငါ့အဖွား မှာစရာတွေ အများကြီးနဲ့ ငြိမ်သက်သွားပြီ။ ငါ့အဖွား ပြောစရာတွေ အများကြီးနဲ့ တိတ်ဆိတ်သွားပါပြီ။ ငါ့ကို အမြဲလက်ယပ်ခေါ်တတ်သူ ငါ့ကို သူ့လက်ပေါ်မှာပဲ ကြီးပြင်းစေခဲ့သူ...
ဇင်လင်း – အစိုးရ ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြတိုင်း ပြည်သူတို့အပေါ် အခွန်တိုးကောက်သင့်သလား?
ဇင်လင်း – အစိုးရ ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြတိုင်း ပြည်သူတို့အပေါ် အခွန်တိုးကောက်သင့်သလား? (မိုးမခ) မေ ၂၈၊ ၂၀၁၅ နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသလား၊ ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းနေသလားဆိုတာကို သိရှိလိုတဲ့အခါ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ရသုံးမှန်း ခြေ ငွေစာရင်း (ဘတ်ဂျက်)...
စောဝေ – အဖေတူသားများ
စောဝေ – အဖေတူသားများ (မိုးမခ) မေ ၂၇၊ ၂၀၁၅ အနှစ်သာရတွေပြောပြီး အကာတွေပဲ လုပ်ခဲ့တယ်။ အများအတွက် ကြွေးကြော်ပြီး ကိုယ်ကျိုးစီးပွားပဲ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဂလိုဘယ် (လ်) လိုက်ဇေးရှင်းပြောပြီး တမိန့်တအာဏာပဲ သုံးခဲ့တယ်။...